Japana : ‘Yoshiharu Habu sy ny Shogi maoderina’, tetikasam-pandikanteny ifarimbonana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2018 4:38 GMT
(Lahatsoratra ôrizinaly nivoaka tamin'ny mey 2009)
Nahita masoandro tampoka teo ny tetikasa fandikan-teny fanaovan-tsoa iray mba handikana ho amin'ny teny anglisy ny sanganasan'i Mochio Umeda, mitondra ny lohateny hoe “Mijery ny Shogi-n'i Silicon Valley – Habu Yoshiharu sy ny Vanim-potoana maoderina” (シリコンバレーから将棋を観る-羽生善治と現代). Tsy ampy herinandro ny namitana azy iray manontolo.
‘Shogi Game’, saripikan'i thrig, nivoaka Flickr
Mpilalao shogi (fanorona japoney) matihanina sady manana ny lazany i Yoshiharu Habu [en]. Izy no olona malaza indrindra eto amin'ny tontolon'ny shogi, ankatoavin'ny rehetra tsy misy mitsipaka fa izy no mpahay tetipanorona indrindra amin'izao fotoana (2009) izao. Mpanolo-tsaina ara-tranonkala mitantana orinasa iray sahisahy amin'ny fampiasana renivola miorina ao Silicon Valley i Mochio Umeda, izay lazain'ny tranonkala Asiajin ho manana vina tsara indrindra amin'ny tranonkalan'i Japana [en]. Izy no mpanoratra ny boky be mpividy ‘Web Shinkaron‘ (Teorian'ny fivoaran'ny tranonkala), izay nolazaina tato [en] amin'ny Global Voices, tamin'ny taona 2007.
Mpiondana shogi i Umeda, na dia tsy mpilalao azy aza, fanamarihana izay naverimberiny tao amin'ny bokiny. Andro vitsivitsy talohan'ny nivoahany, nanambara tao amin'ny bilaoginy i Umeda fa vonona amin'ny fandikanteny “Open Source” rehetra ny votoaty, na inona na inona fiteny ampiasaina. Tena mety indrindra ny fotoana satria mitontona tsara ao amin'ny Golden Week izany, ary olona mihoatra ny 10 no namaly ny antson'i Shota Yakushiji [en] hanao azy an-tsitrapo ho amin'ny dikanteny anglisy.
Nampiasa ny sehatra “Google Groups” ireo nandika an-tsitrapo sy tamin'ny Hatena::groups, fitaovana manome vahana ny fiaraha-miasa amin'ny tetikasa, mba ahafahana mandritra ny asa ao anatin'ny 24ora/24 mandritra ny enina andro amin'ny fandikana voalohany, izay nivoaka tao amin'ny PBworks avy eo. Mahery kelin'ny roapolo taona ny salantaonan'ny vondrina ary mbola tsy zatra amin'ny fandikanteny.
Sehatra fifanakalozan-dresaka: Ongoty daholo izany『シリコンバレーから将棋を観る』voatra teny anglisy!
Lahatsoratra feno: Yoshiharu Habu sy ny Shogi maoderina [en]
Tao anatin'ny tapa-bolana, nisy fihenjanana tao amin'ny vondrom-piarahamonina Hatena, momba ny fanehoan-kevitr'i Chika Watanabe [en], mpahay teknolojian'ny fifandraisana miasa ao San Francisco, momba ny hoavin'i Japana [jp]:
Efa nataoko ihany izay nitazonako azy ho ahy, hatramin'izao, saingy eto aho nanapa-kevitra ny hilaza azy rehetra.
1) Mihevitra aho fa tsy hahita intsony ny tanjany taloha i Japana.
2) Miangavy anareo aho hieritreritra mafy ny amin'ny hianaranareo any ivelany sy ijanonanareo any hiasana.
Be mpamaky ny bilaogin'i Chika Watanabe mitondra ny anarana hoe ‘On/Off and Beyond‘ [en] ary niteraka adihevitra aoka izany ny fanehoan-keviny.
Shota Yakushiji, ilay nanomboka ny tetikasam-pandikanteny, nampahatsiahy ny fanambaràn'i C. Watanabe [jp] ary nanamarina ny fanantenany ho antony nanaovany ity tetikasa ity:
Misy fetrany ny zavatra vitan'ny olona ampolony fa azo atao koa ny manantena fa afa-manao zavatra goavana maro ny mpikambana miisa 120 tapitrisa [mponin'i Japana].
Tsy mihevitra aho fa hahita ny tanjany taloha i Japana.
Fa tsy tokony hanaiky resy isika. Tsy afa-manaiky ny hevitra hoe tsy tafarina intsony i Japana aho. Te-hino aho fa hoavy ny andro fa hitsoka amin'i Japana ny “fahendrem-bahoaka mivory” ka hanavotra azy.
Nandray anjara tamin'io tetikasa i Endo Yusuke, mpilalao shogi matihanina ary nandefa izao fanehoan-kevitra manaraka izao [jp]:
Ny zavatra tsara amin'ity tetikasa ity, tsy azo vinaniana sy tsy ampoizina ny fiafarany. Tsy misy fahafinaretana raha vao fantatra mialoha hoe “ity no mandeha alohan'iry”. Ny tsy fahafantarana izay mety ho apoitran'ny hoavy no nanosika anay hanohy. Ny fahafahana mijery akaiky ny fomba sy ny hoe aiza no ampiasaina io angovo io no mandranitra ny fahalianako.
Mbola andalam-pananganana ny fandikanteny ary tongasoa avokoa ny tsirairay hanatsara ny kalitaony na hanangana dosie mifandraika amin'ny lahatsoratra. Misy ihany koa ny dika amin'ny teny frantsay izay i Yoshihisa Yamada no miandraikitra ny fanatontosana azy.
Ahitana ny fehin-kevitry [fr] ny tetikasa avy amin'i Michi Kaifu ao amin'ny Tech Mom from Silicon Valley fame [ jp] ihany koa ato amin'ny tranonkala. Namoaka lahatsoratra momba ny tetiksa ao anatin'ny fampielezana ny kolontsaina japoney i Takuya Honnma [en]. Nametrahan'ny bilaogin'i Yoko Ishikura rohy miresaka ny fitsipiky ny shogi mankany amin'ny YouTube ny tsanganana iray.
Ankasitrahana i Taku Nakajima tamin'ny tolo-keviny amin'ny fanoratana ny lahatsoratra.